लक्ष्मी बैंकका लगानीकर्तालाई ८.५० प्रतिशत बोनस | गृहपृष्ठ
Home लगानी लक्ष्मी बैंकका लगानीकर्तालाई ८.५० प्रतिशत बोनस
on: २८ माघ २०७५, सोमबार १७:५२ लगानी
लक्ष्मी बैंकका लगानीकर्तालाई ८.५० प्रतिशत बोनस
दुर्गम ठाँउमा शाखा विस्तार गर्ने योजनामा केन्द्रित
माघ २८, काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकको वार्षिक साधारण सभाले ८ दशमलव ५० प्रतिशत बोनस तथा शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको छ । सोमवार राजधानीमा आयोजना भएको बैंकको १८ औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरेको हो । बैंकले पारित गरेको बोनस शेयर लगानीकर्तालाई वितरण गरेपछि बैंकको चुक्तापूँजी वृद्धि भई रू. ८ अर्ब ९२ करोड पुग्नेछ ।
१७ ओटा गाँउपालिकामा शाखा विस्तार गरिसकेको यस बैंक दुर्गम ठाउँहरुमा अझ बढी शाखा विस्तार गर्ने योजनामा केन्द्रित भएको बताइएको छ । साथै, ग्राहकहरुलाई नयाँ प्रविधिसँग जोडेर प्रबिधि मैत्री बनाउने लक्ष्य बैंकले लिएको छ ।
बैंकको चालू आवको दोस्रो त्रैमास अनुसार जगेडा कोषमा रू. ४ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ । त्यस्तै, बैंकले सोही अवधिमा रू. ७२ करोड ३७ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ भने वितरणयोग्य नाफा रू. ६७ करोड २१ लाख पुगेको छ । बैंकले पुस मसान्तसम्ममा रु. ७० अर्ब ५७ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । साथै, सोही अवधिमा बैंकले रू. ७५ अर्ब ८९ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ ।
लक्ष्मी बैंक : कम्पनी विश्लेषण (मंगलवार, २१ फागुन २०७५)
२१ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०८:३४
लक्ष्मी बैंकको वितरण योग्य नाफा ६७ करोड २१ लाख
१७ माघ २०७५, बिहीबार २०:५०
लक्ष्मी बैंकको मूल्य समायोजन
१४ माघ २०७५, सोमबार ११:४५
लक्ष्मी बैंकको १८औं वार्षिक साधारण सभा
४ माघ २०७५, शुक्रबार ११:२३